Toddoba Caado oo lagu Yaqaanno Hogaamiyaha Fiican | Hawraar
May 11, 2016 Xiisaha/Xulashada
Toddoba Caado oo lagu Yaqaanno Hogaamiyaha Fiican
Haddaba caadooyinkaas uu qoragu soo helay oo uu Geeska Afrika Afsoomaali u rogay ayaa u ku bilaabay; Waxa aad doonaysaa in aad noqoto hoggaamiye soo jiitada dadka tayada leh, furaha aad taas ku gaadhi kartaana waa in aad adigu marka hore noqoto shakhsiyad tayo leh. Hoggaamintu waa awoodda qof aad u soo jeedin/jiidi karto hibooyinka, xirfadaha iyo fursadaha aad adigu bixinayso. Hoggaamintu waa caqabad ka mid ah caqabadaha nolosha ee ka gudbistoodu juhdiga iyo kartida u baahan tahay.
Maxaa hoggaaminta lama huraan u ah, marka aad is weydiiso ee aad jawaab u hesho ayuun baa aad awoodi karaysaa in aad shiisho oo aad saxar tirto xirfaddaada hoggaamiyenimo. Dhammaan hoggaamiyeyaashii magaca lahaa ee dunida soo maray, sida taariikhdooda aad ku arki karto, wax kasta oo kale waxa ay ka horreysiiyeen in marka hore ay naftooda ka shaqeeyaan illaa ay hubsadeen in ay yihiin dad tayo iyo waxtar leh, sida ay uga shaqeeyeenna ka bogo qormadan uu Geeska Afrika soo ururiyey:
Naftaada bar in ay awood yeelato, laakiin ka ilaali anshax xumada:
Is bar naxariista laakiin ha noqon ruux jilicsan: Waa in aynaan isku qaldin jileeca iyo naxariista. Naxariistu jileec iyo liidasho ma’aha, balse waa nooc ka mid ah awoodda iyo xoogga. Waa in aynu dadkeenna ugu naxariisanna run u sheegid, waa in aynu naxariis iyo tixgelin ruux kasta u hurnaa, waa in aynu khiyaamada iska jirno oo ruuxa ina aaminay daacadnimo ugu naxariisannaa.
Noqo Ruux dhiirran laakiin xishoodka ha ka tegin: Dhiirranaantu waa mid ka mid ah kadimada guusha, hoggaamiyuhu si uu saamayntiisa u xoojiyo, waa in uu ku dadaalaa in uu isagu horgalaha kooxda noqdaan. Waxaa laga filayaa in uu isagu ugu horreeyo cid kasta oo dhibaato timid baadhaysa ama xal u raadinaysa, in uu isagu noqdo ruuxa ugu horreeya ee calaamadaha dhibta garta.
Noqo qof aan kibirka aqoon laakiin ha habsoobin: Ruuxa isha nugul ama habsaysan waa ay ku adag tahay in uu meel sare gaadhaa. Dadka qaar ayaa isku qalda habsada iyo kibir la’aanta, laakiin ha ogaadaan in kibir la’aantu ay tahay fadli iyo karaamo, habsaduna ay tahay cudur. Haa waa cudur, waana la daaweyn karaa, waxa aanay mushkilad u noqotaa horusocodka iyo in qofku uu gaadho hiigsigiisa hoggaamiyenimo.
Baro in aad Han yeelato, laakiin iska jir qabka: Hanku waxa uu ka mid yahay biriishyada lagu gaadho hiigsiga naftu doonayso, waxa uu sharaf u soo jiidaa qofka iyo bulshadiisaba, waxa ay qurxisaa shakhsiyadda hoggaamiyaha waxa aanay dhamaystirtaa ceebihiisa. Laakiin furaha in aad hoggaamiye fiican noqotaa waa in aad noqoto ruux han leh laakiin haddana aan qab weynayn.
Maadaynta iyo kaftanku waa astaanta hoggaamiyaha, laakiin iska jir maangaabnimada:
Waaqa ku horyaalla waajah: